Inona Avy Ny Boky Tsara Indrindra Ny Toeram-Pivarotana Ao Eoropa | Save A Train
Home > Travel Europe > Inona Avy Ny Boky Tsara Indrindra Ny Toeram-Pivarotana Ao Eoropa
Misy be dia be ny antony mahatonga ny olona tia dia lavitra. Ny iray amin'ireo olona ianao dia afaka mandre matetika indrindra dia ny fahafahana manana vaovao sy mampientam-po traikefa. Nahoana no mandeha tsara tarehy dia samy hafa toetra ho zava-po isan-karazany. Junkies adrenalinina maka fialantsasatra mavitrika, miandry ny fientanam-po ny toe-javatra mampidi-doza somary. Foodies mitsidika toerana vaovao mba finaritra ny takelaka amin'ny tsirony vaovao mampientam-po. Ary ho an'ny bookworms amin'ny mpandeha, trano famakiam-boky sy ny boky dia mety ho fivarotana ny toerana tsara tarehy indrindra eto an-tany. Raha toa ianao ka mandeha amin'ny alalan'ny Eoropa sy mitady toeram-pivarotana boky tsara indrindra tany Eoropa mba hitsidika lamasinina, dia manan-teny kely soso-kevitra ho anao:
Frantsa Best Book Stores – Shakespeare & Company, Paris
Frantsa dia mahafinaritra firenena, ary Paris malaza indrindra dia ny toerana halehany. Rehefa mieritreritra ny karazana kanto Paris, Notre Dame tonga ao an-tsaina, amin'ny loharano tsara tarehy sy ny hazo amin'ny serizy mamony. Izany indrindra ny fijery ho hitanao rehefa mitsidika Shakespeare & Company, mahafinaritra miaraka amin'ny Ambiance ny boky ao anatiny.
Maro be ireo mpanoratra (anisan'izany Ernest Hemingway sy Voltaire) Nandany fotoana fanoratana ao amin'ny taonjato faha-17 ity trano. The toerana manodidina no mandrafitra ny talantalana sy ny boky taloha, stacked ho maro dia maro ny efi-trano kely sy ny nooks. Hoy ny boky sprawls fivarotana ny rihana roa, sy avy any ivelany toa be kely noho izany. Shakespeare & Company Tompon'ny maro ihany koa ny zava-mitranga sy ny hariva mpanoratra vakiteny, izay zavatra tsy misy tia boky sy gazety dia tokony malahelo.
Venice dia iray amin'ireo indrindra tantaram-pitiavana tanàna mijery in Italia, Ary an-trano ihany koa ny iray amin'ireo malaza indrindra fivarotana boky tsara indrindra any Eoropa. Libreria Acqua Alta Fantatra tsara noho ny mitahiry boky ao amin'ny koveta be fandroana ary na ny gondola. Misy toerana fitehirizana hafa koa, toy ny siny, ary fanaka hafa mitsingevana. Ihany koa dia manasongadina ny tohatra vita tanteraka fahiny indray boky ao amin'ny lavarangana fidirana.
Miaraka amin'ny tsara tarehy anatiny, Library in High Water Venice dia isalasalana fa mendrika ny fitsidihana ary faly boky rehetra tia. Raha maniry ny hanana izany ho anao sy very ao anatiny, ny tsara indrindra dia hankany Bet raha vao manokatra maraina.
Selexyz Dominikana Book Church Store, Maastricht
Maastricht any Holandy mba tsy ho teo an-tampon'ny fizahan-tany rehetra Wish List. Na izany aza, dia tokony ho tia boky raha toeram-pivarotana sy ny boky indrindra indrindra. Dominikana na Selexyz Dominican Fiangonana amin'ity tanàna ity dia 700 taona rafitra naorina tamin'ny fomba miavaka ny Gothic maritrano.
Zava-mahatalanjona teo ivelany sy minimalist ny anatiny. Dominicanen feno ihany koa ny anaram-boninahitra maro izay faly boky rehetra tia fo. Azonao atao ny hihazona ny kafe ao amin'ny kafe rehefa miaraka mamaky boky. -tsy izany, dia afaka mankafy ny fomba fijery mahafinaritra hatrany ambony rihana.
mahandro & Book, Brussels, Woluwe-Saint-Lambert
mahandro & Boky boky mahavariana dia fivarotana sy ny trano fisakafoanana Velarantany Woluwe-Saint-Lambert, Belzika. Raha maro ireo boky tsara indrindra fivarotana manolotra ny sasany sakafo sy zava-pisotro, mahandro & Boky maka ny foto-kevitra kely kokoa. Tsy mamela anao hipetraka hisakafo voahodidina boky isan-karazany. Izany no mahatonga azy ho tsara toerana ho an'ireo izay te-hankafy na boky tsara sy tsara sakafo. Inona no more, dia azo antoka fa tsy zavatra afaka mahatsapa isan'andro.
Vonona mba hitsidika ny sasany amin'ireo boky tsara indrindra ny toeram-pivarotana ao Eoropa? Azonao atao ny mandeha lamasinina ho any Paris sy Venice, ary koa ny Pays-Bas sy Belzika. Boky ny tapakila maraina koa Aho ka manomboka mieritreritra ny boky po eo amin'ny vakansy manaraka!
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra sy marina hanome voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-book-stores-europe%2F%3Flang%3Dmg- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, ary afaka manova ny /pl ny /ja na /tr sy ny fiteny maro.
#boky #boky #fivarotam-boky #fivarotam-boky #traveleurope